Alohan'ny handehananao lavitra ny fampiroboroboana ny orinasanao an-tserasera dia mila manamarina fa misy olona mitady ny vokatrao na ny serivisinao.
Azonao atao ny mamantatra ny zavatra hitadiavan'ireo olona sy ny volany amin'ny fampiasana ity fitaovana maimaim-poana ity;
Rehefa mametraka ny kaontinao ianao ary miditra ao anatinao dia hahita ny "Menu" menu ary avy eo ao amin'ny menu "Keyword Planner". Hifidy "Hikaroka teny fanalahidy mampiasa fehezanteny, tenimiafina na tranokala. (Resaho amin'ny fampiasana ireny dokambarotra ireny tatỳ aoriana)
Rehefa manao fikarohana amin'ny teny filamatra manokana ianao dia tadidio fa mametraka ny firenena izay mikendry anao ianao. Ho hitanao ny isan'ireo fikarohana isam-bolana ho an'ity lohahevitra manokana ity miaraka amin'ny lisitry ny teny fanalahidy hafa mifandraika amin'izany - ny olona afaka mikaroka - azonao atao ny maka ny lisitra raha te hampandinika azy ireo ianao ao amin'ny takelaka.
Izany dia hanome anao hevitra tsara momba ny halehiben'ny nasainao nosafidiana, orinasa na foto-kevitra.
Tsy maintsy tadidinao fa ireo teny sy fehezan-teny manan-danja amin'ny volavolan-drakitra tena goavana dia mety hanana fifaninanana avo lenta amin'ny valin'ny fikarohana, izay midika fa sarotra be ny hametraka ny tranokalanao amin'ny valim-pikarohana folo voalohany.
Ohatra, raha toa ka te hanandrana sy hiseho amin'ny valim-pikarohana lehibe folo ianao amin'ny teny hoe "web design"Ho sarotra be izany satria izy io dia teny avo lenta ary tsy dia mazava loatra. Tsy maintsy mikarokaroka ny fehezanteny izay mihoatra tena manoritsoritra ny vokatra na ny serivisinao - ohatra "tranokala ao afovoan'i Londres".
Ny pejy tsirairay ao amin'ny tranonkalanao dia tokony hametraka fehezanteny iray manokana mba hanazava tanteraka ny vokatrao na ny serivisy amin'ny fomba iray izay mazava tsara amin'ny mpitsidika sy ny fitaovam-pitadiavana.
Ity lafiny amin'ny orinasanao an-tserasera ity dia antsoina hoe SEO (Fikarohana karazana fikarohana) ho hitanao ireo boky hafa azo jerena ao amin'ny tranokalanay mandrakotra an'io lohahevitra io ary tsarovy fa afaka Manorata ny gazetinay mba hahazoana toro-hevitra sy toro-hevitra farany.